China 92% Alumina Ceramic Lining Steel Fabgha Site Factory Iji gụọ nhazi nhazi omenala na ndị na-eweta ya | YUNFENG
92% Alumina Ceramic Lining Steel ricgha Site na orylọ Ọrụ Iji chọpụta omenala nhazi
Microcrystal eyi-eguzogide alumina okirikiri tube * E were ngwa ebe: mmanụ, Ngwuputa, ígwè igwe, ike osisi na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ihe onwunwe erute ngwá ma ọ bụ na-eyi-eguzogide ihe onwunwe n'elu mmiri mmiri na-asọ site a ọkpọkọ. * Iwere njirimara ngwaahịa ahụ: ezigbo nguzogide abrasion; Nkume mohs nwere ike iru 9.0 * Ewere mpaghara ngwa: Akụkụ nke ngwa: Mmanụ, Ngwuputa, igwe nchara, osisi ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'elu akụrụngwa ma ọ bụ ihe ...
Microcrystal eyi-eguzogide alumina okirikiri tube
* Were ebe a na-etinye ngwa ahụ: mmanụ, ngwuputa, igwe nchara, ụlọ ọrụ ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ebufe ngwa ọrụ ma ọ bụ ihe na-eyi ihe mgbochi n'elu mmiri mmiri na-asọ site na ọkpọkọ.
* Ewere njirimara ngwaahịa ahụ: ezigbo nguzogide abrasion; ike mohs nwere ike iru 9.0
* Were mpaghara ngwa: Mpaghara ngwa:
Mmanụ, Ngwuputa, igwe ihe igwe, osisi ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'elu akụrụngwa ma ọ bụ ihe na-ebute mmiri mmiri na-asọ site na ngwongwo na-eguzogide ọkpọkọ, mmetụta dị ukwuu na-alụ ọgụ nke ọma nke mmetụta nke ihe mgbidi gafere.
* Product atụmatụ:
Akọrọ ịkpụzi ịkpụzi, elu okpomọkụ, na rockwell ekweghị ekwe HR80-90, abụọ naanị ka diamond.
Na mgbakwunye: Enwere ike ịhazi mmepụta dị ka eserese ndị ahịa
* Uru:iyi-eguzogide, mmetụta na-eguzogide ọgwụ, adaba ewu, wdg, ya usoro iwu na-eyi-eguzogide arụmọrụ bụ Ẹkot 260 ugboro nke manganese ígwè, chrome ígwè, 170 ugboro. Nwere ike ịmalite ogologo ndụ ọrụ nke iyi akụkụ.
Emere mkpuchi nke seramiiki ka ọ bụrụ ihe na-eguzogide ọgwụ na abrasion ọbụlagodi na ihe dị elu na-agba na ọsọ ọsọ, na-egbochi iwuli elu ihe. O gosiputala na ọ bara uru karịsịa na itinye ngwa na nchịkọta ngwa. Dị ka ihe onwunwe, seramiiki nwere uru mgbochi mmebi nke na-eme ka ndụ ndụ dị ogologo ma melite nkwụsi ike mmetụta. Efere seramiiki na-ebelatakwa mkpọtụ na ịma jijiji.
Ngwa ndị a na-ejikarị maka lran seramiiki bụ: Chute lining, Conveyor lining, Cyclone ụyọkọ lining, Hopper lining, Pipe lining, Pulley lining, Spout lining, Nyefee ebe mkpuchi, Ihe ọ bụla ọzọ ngwa isiokwu na-eyi
Alumina seramiiki nwere ike ịkwa akwa kpọmkwem seramiiki tile size, udi, na okirikiri nhọrọ ukwuu nke seramiiki lining izute kpọmkwem eyi mkpa maka gị osisi akụrụngwa. Anyị nwere ike iji data sitere na arụmọrụ gị wee mepụta ma mepụta ihe mkpuchi mkpuchi nke na-ezute nrụpụta mmepụta gị.
Ogologo ndu ndu - ugwo onu ahia
N'ọtụtụ ngwa ngwa kachasị mma bụ nsonaazụ nke ijikọta akụrụngwa kachasị mma nke ihe ndị ọzọ na ihe eji eme ya.
Na ijikọta ihe dị iche iche na - eme ka ndụ dị ogologo karịa iji tụnyere nchebe ndị ọzọ. Ihe ndị siri ike nke seramiiki na-enye mgbochi pụrụ iche maka ịpụ na-eyi, ebe ngwongwo na-agbanwe nke ihe ndị ọzọ dị ka roba na-emetụta mmetụta dị egwu. Anyị nwere ike ịmepụta ma rụpụta ihe mkpuchi akwa site na iji seramiki, roba, metal, polyurethane na ngwakọta nke ihe ndị a.
The seramiiki linings na-emepụta na anyị onwe anyị n'itinye nlezianya mma nkwa mmemme na bụla frasi nke nnyocha, mmepe, imewe na mmepụta. Nke a na - eweta ogo dị iche iche maka ogo niile. Kpọmkwem akụkụ na nso tolerances hụ na gị seramiiki lining zaa mkpa chọrọ.
Nke gara aga: Hexagonal Efere eyi-eguzogide ọgwụ Liner Hopper eyi Efere Liner efere Kol Hopper
Osote: Efere-Ejikọtara 92% Alumina Ceramic Tile maka Osisi Na-agbaze
Alumina Efere Cones
Alumina Efere sịlịnda N'ihi Steel Pipe Lining
Alumina Efere Lining Steel Bend tube
Alumina Efere Pipe
Alumina Efere tube
Nnukwu dayameta conone tubes nke alumina seramiiki
Eyi eguzogide ọgwụ Alumina liner Pipe